May 2016 - Sawirrotv
Barnaamij: Sidii Loo Fuliyay Qaraxii Diyaaradda Daallo Airlines (VIDEO)
Iyadoo Ragii Soo Abaabulay qaraxii diyaaradda Daallo Airlines ay shakay Xukuntay Maxkammada ciidamada Qalabka sida ayaa caawa waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa barnaamijkii laga diyaariyay si loo fuliyay Qaraxani. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Hooyo Soomaaliyeed oo Taksiile ka ah Dalka Australia oo ka Yaabsatay Ragii (VIDEO)
May 31, 2016 – Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Australia ayaa waxay ka yaabsatay ragii ku shaqaysan jiray Taksiilenimada, waxayna sheegaty in rag badani ay ku yiraaheen “maad iska daysid Taksiga waa howl rageede”. Hooyadan ayaa ka warantay Xaalada Nolosheeda, Iyadoona Amaan Badan u soo jeedisay Dawladda Dalkaasi Austaralia oo ay sheegtay inay bartay …
Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo soo Gaaray Magaalada Nairobi (VIDEO)
May 31, 2016 – Waxaa Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya soo gaaray Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane, Shariif Sheekh Axmed, waxaana si weyn halkaasi ugu soo soo dhaweeyay dadweyne aad u farabadan. Jaaliyada Soomaaliyed ee Magaalada Nairobi ayaa madaxweynaha si diiran ugu soo dhawaysay Garoonka Diyaaradaha iyagoo dadkani ay siteen Calanka baluuga ah …
Booqashadii Sheekh Shariif ee Nairobi (VIDEO)
Shariif Sheekh Axmed ayaanan la ogeyn ujeedka socdaalkiisa ee Magaalada Nairobi, waxa uuna warbaahinta u sheegay inuu halkaasi u soogaaray kulan uu la qaadanayo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Wiil Shaqada Baalashle ka Bilaabay oo Hadda Noqday Nin Hanti Leh (VIDEO)
May 31, 2016 – Wiilkan oo hadda 15-jir ah ayaa ka dhashay qoys sabool ah, waxaana u suuro galin in uu aado iskuul, maadaama uu qoyskooda ka caawin jiray qultulyoonka. Wiilkani Dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ayaa ku nool magaaladda Borama, Waxaana marar badan lagu waraystay TV-yada Soomaaliyeed maadaama sheekada noloshiisa ay tahay mid cajiib ah oo …
Baalashlihii Hamigiisa Gaaray (VIDEO)
Wiilkani Dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ayaa ku nool magaaladda Borama, Waxaana marar badan lagu waraystay TV-yada Soomaaliyeed maadaama sheekada noloshiisa ay tahay mid cajiib ah oo dhalinyarada qaar Hamigooda kor u soo qaadaysa (success story). Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Faysal Cali Waraabe oo Sheegay Inaysan Waxba Kasoo Baxayn Shirka Somaliya & Somaliland (Dhagayso)
May 31, 2016 – Maanta ayaa la filayaa in Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uu ka furmo wada-hadalo u dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, kaas oo looga hadlayo Midnimada Soomaaliya. Wada-hadalka ayaa waxaa Garwadeen ka ah Dowladda Turkiga, iyadoo sidoomkale ay jiraan Dowlado Carbeed oo ka qeyb qaadanaya dhex dhexaadinta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. …
DAAWO: Sababta ay Dhalinyarada Soomaaliyeed Badaha Ugu Dhimanayaan (VIDEO)
May 31, 2016 – Dhalinyrada Soomaaliyeed meel kasta haka joogaan dalkeena Soomaaliya waxaa haysata shaqo la’aan xoogan, xitaa hadii aad soo dhamaysay Jaamacad kamid ah jammacadaha ugu magaca weyn ee dalka micnaheedu ma’aha inaad shaqo helaysid. Waxaana goobaha shaqooyinka dalkeena ka socda garabaysi iyo nin jeclaysi haba u badnaadaane shaqooyinka loo simanyahay ee dowladda ay …
Hooyadii Taksiilaha Ahayd (VIDEO)
Dhinaca kale Hooyadan ayaa waxay curisay hees ay dalka Australia ku amaantay, iyadoona Heesta ay ugu magac dartay “Australia Iftiinkii aduunkaay”. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho
Shirkii Gudoomiyaha Gobolka (VIDEO)
Guddoomiyaha ayaa ugu danbeyntii Madaxda Dowladda iyo Dadka wax haysta ugu baaqay in ay Gargaar u fidiyaan Dadka Tabaaleysan ee aan awoodin afurkooda. Xafiiska Sawirrotv.com Muqdisho